Apple Inoburitsa 4.3th Beta yewatchOS XNUMX yeVagadziri | Ndinobva mac
Ruben gallardo | | apuro, Apple Watch
Vhiki rino ranga rizere neshura. Pakutanga kwemazuva manomwe ekupedzisira, Apple yakatanga mabetas emapuratifomu akasiyana. Uye pakati pavo paive ne yechishanu beta yeWOSOS 4.3. Uye zvakare, nezuro vakomana kubva kuCupertino vakaita mutsva wechiitiko mukuru mukupera kwemwedzi. Uye nezuro masikati iyo yechitanhatu beta yeWOSOS 4.3 yevagadziri.
Pasina kana vhiki, vakomana veCupertino vaisa turbo kuchirongwa chavo chebeta uye vatangisa chechipiri uye ikozvino chechitanhatu chewadhi yavo yakangwara, iyo Apple Watch. Vazhinji vanotarisira izvozvo ngazvive kuguma kwemwedzi apo Apple inosarudza, kamwe chete uye zvachose, kuvhura iyo yekupedzisira vhezheni yemapuratifomu avo. Uye neiyi yekupedzisira sprint yekambani, zvinoita sekunge zvese zviri kufamba.
Isu hatisati taziva zvinoonekwa nevagadziri pane ino yazvino beta. Uye zvakare, tinorangarira kuti mune iyo Apple Watch, iyo betas haisi yeruzhinji, asi vanogadzira chete ndivo vanokwanisa kuwana. Zvakadaro, iyo irikuuya watchOS 4.3 kuburitswa ichave izere nekuvandudza. Pakati pavo tinogona kunyora iwe:
Ichave iripo zvakare dzora iyo iPhone Music app kubva kuApple Watch
Nyowani mamiriro emanheru patinenge tichichaja iyo Apple Watch mune portrait modhi
Kuvandudza kwekuita kwebhatiri; ndokuti, kuzvitonga kuzhinji paApple Watch
Nyowani kurodha mifananidzo
Nyowani nyowani paunovhura mashandisiro
Mutsva mutsva wekuzivisa kana Ngativhurei Mac kuburikidza neApple Watch
La Chiitiko chinoratidzwa muSiri sphere
Zvakare, uye sezvatakataura, hatizive kana paine zvimwe nhau pakupera kwemwedzi. Uye ndizvo izvo inotevera Kurume 27 ichaitirwa muChicago. Hongu zvichave chiitiko chine chekuita nedzidzo. Saka hatizive kana iyo Apple Watch ichave nenzvimbo mairi kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Apple inoburitsa yechitanhatu beta yewatchOS 4.3 yevagadziri